စစ်တကောင်း ယာဉ်ထိန်းရဲကင်းအား ဗုံးဖောက်ခွဲမှု အရှေ့အလယ်ပိုင်းရောက် ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားက ကြိုးကိုင်ဟုဆို ။ ၎င်းတို့လက်ချက်ဖြစ်ကြောင်း အိုင်အက်စ်တို့က ကြေညာ၍ လက်သစ် JMB တို့ဖြစ်ကြောင်း ဘင်္ဂလားဒက်ရှ် သတင်းထုတ်ပြန်။ – H2Oupdatenews
စစ်တကောင်း ယာဉ်ထိန်းရဲကင်းအား ဗုံးဖောက်ခွဲမှု အရှေ့အလယ်ပိုင်းရောက် ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားက ကြိုးကိုင်ဟုဆို ။ ၎င်းတို့လက်ချက်ဖြစ်ကြောင်း အိုင်အက်စ်တို့က ကြေညာ၍ လက်သစ် JMB တို့ဖြစ်ကြောင်း ဘင်္ဂလားဒက်ရှ် သတင်းထုတ်ပြန်။
oungmarine11@outlook.com 22/08/2020	No Comments
ဘင်္ဂလားဒက်ရှ်နိုင်ငံ စစ်တကောင်းမြို့ ယာဉ်ထိန်းရဲကင်းအား ဗုံးဖောက်ခွဲမှုနှင့် ပတ်သက်၍ ဖမ်းဆီးထားသူ ၄-ဦးအနက် တစ်ဦးက တရားရုံးတော်ရှေ့မှောက်တွင် ဖြောင့်ချက်ပေးခဲ့ကြောင်း စစ်တကောင်း မြို့တော် အကြမ်းဖက်မှု တန်ပြန်တိုက်ဖျက်ရေး ရဲတပ်ဖွဲ့က သောကြာနေ့၌ ပြောဆိုသည်ဟု bdnews 24 က ယနေ့ရေးသားသည်။
လွန်ခဲ့သည့် ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၈-ရက်နေ့ စစ်တကောင်းမြို့ ရှိလိုရှာဟာတွင် ဖြစ်ပွားသော စစ်သွေးကြွများ၏ ဗုံးဖောက်ခွဲမှုနှင့်ပတ်သက်၍ ဖမ်းဆီးခံရသူများအနက် တစ်ဦးက ဖြောင့်ချက်ပေးရာတွင် တိုက်ခိုက်မှုအား ကြိုးကိုင်သူမှာ “ရှာဂျဟန်” ဟု အမည်တစ်ခုတည်းသာ ပြောဆိုကြောင်း၊ အသက် ၃၀ အရွယ်ရှိပြီး စစ်တကောင်းခရိုင် လိုဟာဂါယာမြို့နယ်ဇာတိဟု သိရှိရသည် ဆို၏။
ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင် ၂-ဦး၊ ကလေးငယ် ၁-ဦးနှင့် လမ်းသွားလမ်းလာ ၂-ဦးတို့ ဒါဏ်ရာရရှိစေခဲ့သည့် အဆိုပါ ဗုံးဖောက်ခွဲမှုမှာ မိမိတို့လက်ချက်ဖြစ်ကြောင်း အရှေ့အလယ်ပိုင်းအခြေစိုက် “ အစ္စလာမစ်နိုင်ငံတော် ထူထောင်သူ” IS အိုင်အက်စ်တို့က ကြေညာသည်ဟု ထိုစဉ်က အမေရိကန်ထောက်လှမ်းရေးအုပ်စု SITE Intel Group ၏ Twitter စာမျက်နှာ၌ ရေးသားထားသည်ကို တွေ့ရှိရသည်။
ဖမ်းဆီးခံရသူများမှာ မိုဟာမက်ရှာဟစ် ( ၂၀-နှစ် )၊ ဆိုင်ဖူလ္လ် ( ၂၄-နှစ် )၊ အမ်ရန် ( ၂၅-နှစ် ) နှင့် အဘူဆယ်လာ ( ၂၅-နှစ် ) တို့ဖြစ်ကြောင်း၊ အမ်ရန်သည် စစ်တကောင်းတက္ကသိုလ်၊ ဈေးကွက်ပညာ ကျောင်းသားဖြစ်ပြီး အားလုံးမှာ “ဂျမတ်အူလ်မူဂျာဟီဒင်၊ ဘင်္ဂလားဒက်ရှ် “ ခေါ် “JMB လက်သစ် “ များ ဖြစ်ကြောင်း၊ ၎င်းတို့အား အကြမ်းဖက်မှုတန်ပြန်တိုက်ဖျက်ရေးယူနစ်က “ ပန်ချယ်လစ်ရဲစခန်း၌ “ ၁၈၈၄-ခုနှစ် ပေါက်ကွဲခြင်း များဆိုင်ရာဥပဒေ “ အရ အမှု့ဖွင့်လှစ်ထားသည်။
ရှိလိုရှာဟာလမ်းဆုံ ယာဉ်ထိန်းရဲကင်း ဂိတ်အမှတ် ၂- တွင် ဗုံးထောင်ခဲ့ ၂-ဦးအနက် ရှာဟစ်အား ဇူလိုင်လ ၂၇ ရက်၌ ကော့ဘဇားခရိုင်၊ ချာကရီယာမြို့နယ်ရှိ ခယ်မဖြစ်သူ၏ နေအိမ်တွင် ဖမ်းဆီးရမိခဲ့သည်။ ရှာဟစ်၏ အစစ်ခံချက်အရ ရှာဂျဟန်ဆိုသူသည် တော်လှန်ရေး အစွန်းရောက် အစ္စလာမ်မစ်အယူအဆများကို ဟောပြော သိမ်းသွင်းသူဖြစ်ကြောင်း၊ ရှာဟစ်သည် အဖွဲ့အမည် “ လက်သမားဆရာ “ အဖြစ် အစွန်းရောက် အစ္ဒလာမ်မစ်တစ်ဦးဖြစ်လာခဲ့ကြောင်း၊ ရှဂျဟန်ကပင် တိုက်ခိုက်မှုပြုလုပ်ရန် ငွေကြေးထောက်ပံ့ကူညီခဲ့ကြောင်း၊
ရှာဂျဟန်သည် ယူအေအီးနိုင်ငံ ဒူဘိုင်းမြို့တွင် အလုပ် လုပ်ကိုင်သူဖြစ်ပြီး လွန်ခဲ့သည့်နှစ်၌ အစ်မဖြစ်သူ ကွယ်လွန်သည့်အတွက် ဘင်္ဂလားဒက်ရှ်သို့ ပြန်လာခဲ့ကြောင်း၊ ထိုစဉ်မှစ၍ ပြည်တွင်း၌ အစ္စလာမ်မစ်အုပ်စုကို ဖွဲ့စည်းခဲ့၍ တိုက်ခိုက်ဖျက်ဆီးရေးများအတွက် အကွက်ချကြံစည်ခဲ့ကြောင်း၊ လွန်ခဲ့သည့်နှစ် ရာမာဇန် ဥပုသ်ကာလတွင် ဘင်္ဂလားဒက်ရှ်မှ ပြန်လည်ထွက်ခွာသွားခဲ့ပြီး ၎င်း၏ပြည်တွင်းအစ္စလာမ်မစ်အုပ်စုနှင့် အွန်လိုင်းအက်ပလီကေးရှင်းများအသုံးပြု၍ ဆက်သွယ်မှု ပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်း၊ ပြည်ပ၌ ရောက်ရှိနေသည့် ရှာဂျဟန်နှင့် ပတ်သက်သည့် သတင်းအချက်အလက်များ ပိုမိုရရှိရန် ရဲတပ်ဖွဲ့က စုံစမ်းလျှက်ရှိကြောင်း အကြမ်းဖက်မှု တန်ပြန်တိုက်ဖျက်ရေးအဖွဲ့တာဝန်ရှိသူ အတ္တားဟိုစိန်က ပြောဆိုသည်။
(( ဘင်္ဂလားဒက်ရှ်သည် ၎င်းနိုင်ငံအတွင်း၌ ပြည်ပအစွန်းရောက်အကြမ်းဖက်တို့နှင့် ဆက်စပ်သော အဖွဲ့အစည်းများ မရှိကြောင်း အစဉ်တစ်စိုက်ငြင်းဆိုပြီး ၎င်းတို့ ပြည်တွင်းမီဒီယာအားလုံးတို့ကလည်း လေသံတစ်မျိုးတည်း ရေးသားလေ့ရှိပါသည်။
အထူးသဖြင့် “ အစ္စလာမ်မစ်နိုင်ငံတော် ထူထောင်သူ “ IS အိုင်အက်စ်တို့သည် မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းရှိ ARSA အဖွဲ့ကို ပံ့ပိုးလျှက်ရှိပြီး စစ်သွေးကြွများကို လေ့ကျင့်ပေးရန် ဘင်္ဂလားဒက်ရှ် အကြမ်းဖက်အဖွဲ့အား ကူညီလျှက်ရှိကြောင်း အိန္ဒိယသတင်းမီဒီယာတို့ရေးသားချက်မှာ မှန်ကန်ခြင်းမရှိဟု မကြာသေးမီအထိ ငြင်းဆိုသည်။ ဒုက္ခသည် ဘင်္ဂါလီ ( မူရင်း ရိုဟင်ဂျာ ) စခန်းများ၌ အာရကန်ရိုဟင်ဂျာဆိုသူများ ကယ်တင်ခြင်းတပ် (ARSA) တို့ လှုပ်ရှားနေခြင်း မရှိ၊ ပါကစ္စတန်ထောက်လှမ်းရေးအေဂျင်စီ၏ ကျောထောက်နောက်ခံဖြင့် စစ်ရေးလေ့ကျင့်လျှက်ရှိသည်ဆိုခြင်းမှာလည်း မမှန်ကန်ကြောင်း ဘင်္ဂလားဒက်ရှ်အစိုးရတာဝန်ရှိသူများက ပယ်ချခဲ့ပါသည်။ (Dhaka Tribune., 18 August 2020, Govt officials: No existence of ARSA in Rohingya camps. By: Humayun Kabir Bhuiyan)
ဂျာမနီအခြေစိုက် DW မီဒီယာသည် အိန္ဒိယသတင်းစာများအား ကိုးကားရေးသားနေပြီး၊ အိန္ဒိယသတင်းစာများကလည်း DW ရေးသားချက်ကို ကိုးကားနေသည်ဟု ချေပသည်။ သို့သော် ARSA အဖွဲ့ဝင်များနှင့် လူတွေ့ အင်တာဗျူးခဲ့သော ဘယ်လ်ဂျီယန်အခြေစိုက် “ နိုင်ငံတကာ လက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခများ လေ့လာရေးအုပ်စု “ ICG “ နှင့် သြစတေးလျအကြမ်းဖက်သုတေသီတို့၏ ဖော်ပြချက်များကို ထည့်သွင်းပြောဆိုခြင်းမရှိပါ။
ဖေဖော်ဝါရီ-၂၃၊ ၁၉၉၈ ခုနှစ် အိုစမာဘင်လာဒင်က အယ်လ်ကိုင်ဒါရှေ့ပြေး “ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အစ္စလာမ်မစ်တပ်ဦး “ ကို အာဖဂန်နစ္စတန်၌ ဖတ္တဝါကြေညာ၍ ဖွဲ့စည်းစဉ် ဘင်္ဂလားဒက်ရှ်မှ ဂျီဟဒ်လှုပ်ရှားသူ Fazlur Rahman ဖက်ဇ်လာရာမန် ပါဝင်လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြောင်း တွေ့ရှိရသည်။( Jihad Against Jews and Crusaders.,World Islamic Front Statement. 23 February 1998 )
၁၉၉၉ မှ ယခုနှစ်ပိုင်းအထိ ဘင်္ဂလားဒက်ရှ်နိုင်ငံတွင် အသေခံဗုံးခွဲခြင်းအပါအဝင် အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှု၊ ကြံစည်မှု အကြိမ် ၅၀ ကျော်ရှိခဲ့သော်လည်း ဘင်္ဂလားဒက်ရှ်အစိုးရက “ဂျမတ်အူလ်မူဂျာဟီဒင်၊ ဘင်္ဂလားဒက်ရှ် “ ခေါ် အစွန်းရောက် အစ္စလာမ်မစ် “JMB လက်သစ် “ များကိုသာ အပြစ်ပုံချခဲ့သည်။
၁၉၉၈-ခုနှစ် ဒင်နာ့ဂျ်ပူခရိုင်တွင် ဖွဲ့စည်းခဲ့သော အဆိုပါအဖွဲ့အစည်းကို ၂၀၀၁-ခုနှစ်ရောက်မှသာ လူအများ သိရှိကြသည်။၂၀၀၅ ခုနှစ်တွင် NGO အဖွဲ့အစည်းများအား တိုက်ခိုက်မှုအပြီး ဘင်္ဂလားဒက်ရှ်အစိုးရက တရားမဝင် အဖွဲ့အစည်းအဖြစ် ပိတ်ပင်တားမြစ်ခဲ့သည်။ JMB တွင် အနည်းဆုံးအဖွဲ့၀ င် ၁၀,၀၀၀ ပါဝင်သည်ဟု ယုံကြည် ရပြီး တရားဝင်အစ္စလာမ်မစ်အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ချိတ်ဆက်မှုများအပါအဝင် အဖွဲ့အစည်းအမျိုးမျိုးတို့နှင့် ကျယ်ပြန့်သောကွန်ယက်ရှိသည်ဟု ရေးသားချက်များ တွေ့ရှိရသည်။ ။ သတင်းဘာသာပြန်သူ ))
#JMBလက်သစ် #ICG #စစ်တကောင်းယာဉ်ထိန်းရဲကင်းအား_ဗုံးဖောက်ခွဲမှု
((( Bdnews24., 22 Aug 2020, “ Dubai migrant plotted attack on Chattogram traffic police box: officials. By: Uttam Sen Gupta” ကို #HtayOung, #OungMarine ဆီလျော်အောင်ကောက် နှုတ်ဘာ သာပြန်ဆိုသည်။ )))
Previous Previous post: D614G ကိုရိုနာ ဗိုင်းရပ်စ်ဆိုတာ ဘာလဲ။ ယခင်က ရှိခဲ့ဖူးသလား ဘယ်လောက်ပြင်းထန်သလဲ။ ဘာ့ကြောင့် ကူးစက်မှု ပိုမိုလျှင်မြန်ရသလဲ။ ရောဂါပြင်းထန်ခြင်းမရှိသည့် ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်မူကွဲအမျိုးအစားသစ်ကို စင်္ကာပူသိပ္ပံပညာရှင်များ တွေ့ရှိ ။
Next Next post: ထီးနဲ့ ထိုးသင့်ပါတယ်။